အွန်လိုင်းကစားနှင့်အတူ likeminded ယုတ်လူ
မှကြွလာသောအခါအညမ်း၊အရာအားလုံးရုပ္ရွင္ပို။ ကျနော်တို့ကဲ့သို့သောဆိုဒ်များကိုသာပရိသတ်ကြိုးစားနေတူတကွရောနှောနေခြင်းဖို့ Instagram နဲ့အတူညစ်ညမ်းနှင့်အတူဆိုဒ်များအရွယ်ရောက်ပြီးအချိန်ဖန်တီးတဲ့သူမ်ိဳးတူပလက်ဖောင်းအတွက်။ ကောင်းစွာ၊ကျွန်တော်၏အတွေးအယူအဆသစ်နှင့်အနာမေျပာပါ။ လိင်ဗီဒီယိုဂိမ်းများ Tumblr ကြာသင့်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးအရာက Tumblrႏသူတို့ကိုပေါင်းဘော်တက်နှင့်အတူအလှအပ၏အရွယ်ရောက်ပြီး၊အပေါ်တစ်ဦးပလက်ဖောင်းလိမ့်မည်ဟုဧကန်အမှန်အသင်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ဖျော်ဖြေ။ ကျွန်တော်ဒီဆိုဒ်ကိုယခုကား၏လိုအပ်ချက်များကိုခံစားခဲ့ချင်သူကစားသမားတစ်ခုခုပိုအလှန်ထွက်သူတို့၏ညစ်ညမ်းအတွေ့အကြုံ။, အပြန်အလှန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်မှကြွလာနှစ်ဦးလမ်းညွန်။ အပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံး၊သင်အသစ် HTML၅ ဂိမ်းများဖြစ်ကြောင်းလမ်းပိုပြီးနက်ရှိုင်းအရင်ကထက်။ အဆိုပါဂိမ်းသည်ပိုမိုရှုပ်ထွေးပြီးတွေအများကြီးပေးထားပါတယ်လွတ်လပ်ခြင်းနှင့်စိတ်ကြိုက်။ ပြီးနောက်သင်ရှိသည်၏ဝမ်းမြောက်ခြင်းအသိုင်းအကြောင်းအင်္ဂါစေထိတွေ့နှင့်အတူအခြားကစားသမားများနှင့်စကားပြောကြောင်းကိုစိတ်ကူးယဉ်နှင့်ပတ်သက်သောလိမ့်မယ်။
အားလုံးဒီခံစားပေါ်ဤအမှတ်တံဆိပ်-ဆိုဒ်အသစ်လိုအပ်သောဘာမှမ။ မသာကြောင်း၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းကမ်းလှမ်းအခမဲ့ဂိမ်း၊သင်မူကားမည်မဟုတ်ပင်မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်အပေါ်ဆိုက်၊သို့မဟုတ်တစုံတခုကိုမျှ။ အားလုံးဖွင့်-အခြေခံပြီးဂိမ်းအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်။ မဖော်ပြသောအစုသည်သားကြီးမားခြင်းနှင့်ကြီးထွားလာ။ အတူဒါကြောင့်အများအပြားဂိမ်းများအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ပလက်ဖောင်း၊သင်အကယ်စင်စစ်ရှာဖွေဖို့တစ်ခုခုကစားကြောင်းကျေနပ်အောင်လိမ့်မည်။
သင်အချိန်အခါ Tumbler ခဲ့ပြီးပြည့်စုံသောနေရာခံစားဖို့အသင့်ဖြစ်သေား? ကျွန်တော်သိသည်အတိုင်းလည်းအောက်မေ့သတိရအပေါင်းတို့သည်သေားခဲ့ကြကြောင်းပေါ်တွင်ရေပန်းစားသောပလက်ဖောင်း။ တကယ်တော့၊ကျနော်တို့သုံးစာရင်းများလိင်ညစ်ညမ်းအမျိုးအစားဟာ Tumblr အပေါ်ထားရန်အတူတကွဤအစုအဝေး။
လူကြိုက်အများဆုံးအမျိုးအစားကျွန်တော်တို့ရဲ့နှင့်အတူ Tumblr ပရိသတ်သည်ကြွလာနှင့်အတူ yaoi လိုးရေးယူ။ အားလုံးသင်အကြိုက်ဆုံးတြန္းဇာတ်ကောင် reimagined အဖြစ်လိင်အတွက်ပုံပြင်များအကြောင်းညှို့လိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်အတော်များများလည်းရှိပါတယ်မူရင်းလိင်လိုးဂိမ်းများ။ ကျွန်တော်လည်းတားမြစ်ထားပါတယ်စိတ်ကူးယဉ်၏စာရေးနှင့်အတူလိင်မိသားစုလိင်ဤစုဆောင်းခြင်းအတွက်။ သင်ဂိမ်းကစားသည့်အတွက်ညီအစ်ကိုများမှာသံုးေစျပီးအမာခံအကြားအရေးယူအ daddies နှင့်၎င်းတို့၏ယုတ်သား။
သင်တစ်ခုခုကိုချင်တယ်ဆိုရင်မှောင်နှင့်ပိုပြီးအစွန်းရောက်၊ကျနော်တို့ကအပူဆုံးလိင်စာမျက်နှာများ simulators အပေါ်။ အကြောင်းပြောနေတာသော၊လိင် simulators ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်အလာစာရေးနှင့်အတူလိန်အခွင့်၊မင်းဗီဒီယိုဂိမ်းဇာတ်ကောင်သို့သော်သင်ရှာတွေ့။ သင်မူကားလည်းပျော်မွေ့နိုင်အသေးစိတ်စိတ်ကြိုက်သာဤဂိမ်းများ၊စေလိမ့်မည်ဟူသောဖွင်မည်သူမဆိုသင်ချင်အဖြစ်ဇာတ်ကောင်များ။
အခုပိုပြီးအမျိုးအစားဂိမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ်တွင်ခေတ်စားသောအနှင့်အတူနှစ်ဦးစလုံးလိင်နှင့် bicurious။ ငါအကြောင်းပြောနေတာပေါ့လိင်ချိန်းတွေ့ simulators နိုင်သည့်အတွက်ဖန်တီးထားတဲ့စက်ဝိုင်းပြီးတော့သွားထိမှန်ထိုမြို့အဘို့အရှာဖွေနေပူပါဘူးဘယ်သူနိုင်မည့်။ သင်သည်လိမ့်မယ်အချစ်ဒီဂိမ်းကြောင့်အစာမတူခံစားရ NPCs။ သူတို့အားလုံးလာနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်သင်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်အတူသွားကြဖို့ကွဲပြားခြားနားသောအရွံုးနည်းပညာတွေကိုအသီးအသီးအဘို့ထိုသူတို့။ နှင့်အတူဤမျှလောက်များစွာသောအခြားသေားမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းမှု၊ငါ့ကိုအယူမယ်လို့စာမျက်နှာများရုံမှစာရင်းမှာသူတို့ကို။ ဒါကြောင့်၊ငါစေမယ်သင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြားအရာအားလုံးအားဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုည။
အကောင်းဆုံးအင်္ဂါရပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေအောင်အစည္း၏အင်္ဂါ Tumblr သည်အပေါင်းတို့ကစားသမားတွေကျွန်ုပ်တို့၏ပလက်ဖောင်း။ သင်နိုင်ပါလိမ့်မည်နှစ်ခုလုံးအနှုန်းသည်အကြောင်းအရာကိုကြည့်ပြီးအပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်။ သို့သော်သင်သည်လည်းနိုင်စေဖို့ဆွေးနွေးသင်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်သေားမျှသည်ကစားသမားနှင့်အတူငါတို့၏ဆိုက်ကို၏။ သို့သော်နှင့်မတူ၊Tumblr၊ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှလုပ်သင်အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးဒီမှာ။ သင်ပါလိမ့်မယ်ကစားအားလုံးဂိမ်းများနှင့်အပြန်အလှန်ဃာနှင့်အတူမပါဘဲအစဉ်အဆက်ပေးခြင်းကျွန်တော်တို့ကိုသင့်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်သို့မဟုတ်ပေါ်တွင်တက်လက်မှတ်ထိုး၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလက်ဖောင်း။, ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီသိလို့ဘယ်လောက်အရေးတစ်ဖြောင့်ရှေ့ဆက်နှင့်ထုထည်ညစ်ညမ်းအတွေ့အကြုံ၊အထူးသဖြင့်ကြွလာသည့်အခါအ wot မွာေသေား။ ဒါကြောင့်၊သင်ကိုယ်တိုင်ကြကုန်အံ့သိမ်းသွားခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်နှင့်ခံစားကြည့်ပါန့်အသတ်လိင်ဂိမ်းကစားယနေ့ည!
© Copyright 2021 Gay-Video-Games-Tumblr All Rights Reserved